News Collection: दगुर्दा बढ्छ यौनशक्ति
दगुर्दा बढ्छ यौनशक्ति
नियमित दगुर्ने व्यक्तिको यौनजीवन नदगुर्नेको अपेक्षामा बढी सक्रिय हुन्छ ।अनुसन्धानअनुसार यसका लागि गरिएको सर्वेक्षणमा बिहान बिहान दगुर्ने प्रत्येक १० जनामध्ये एकजना व्यक्ति (जगर्स) ले दिनहुँ कम्तीमा एकपटक यौनसम्बन्ध स्थापित गर्ने कुरो स्वीकार गरे । अर्कातिर, तीन प्रतिशत जगर्सको भनाइअनुसार उनीहरू दिनमा दुईपटक स्वस्थ यौनसम्बन्धको आनन्द उठाउँछन् । अनुसन्धानअन्तर्गत ती व्यक्तिहरूसँग समेत कुराकानी गरियो जो दगुर्दैन थिए । यस्ता चार व्यक्तिमध्ये एकजनाले महिनामा एकपटक सहवास गर्ने बताए ।
यो अनुसन्धान एक हजार जगर्स र त्यतिकै संख्यामा नदगुर्ने व्यक्तिहरूमा गरियो । अनुसन्धान गराउने संस्था 'स्यु राइडर केयर' का अनुसार १० जनामध्ये एकजना पुरुषले के स्विकारे भने उनीहरू व्यायाम गर्दाताका यौनक्रियाबारे सोच्छन् । अर्कोतर्फ, केवल ५ प्रतिशत महिलाले दगुर्दा वा व्यायाम गर्दा यौनक्रियाबारे सोच्ने गरेको बताए । व्यायाम गर्ने सम्पूर्ण महिला व्यायामले कति फाइदा गर्छ भन्ने सोच्नमै व्यस्त हुन्छन् ।
मस्तिष्क हुन्छ नियन्त्रित
काम वा अध्ययनका बेला धेरैजसो व्यक्ति सपनाको दुनियाँमा हराएका हुन्छन् । उनीहरूको मस्तिष्क यताउता डुल्न थाल्छ, भनेको ठाउँमा दिमाग केन्दि्रत रहँदैन ।
विज्ञहरूका अनुसार यसो हुनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन । र, यसबाट मुक्तिका लागि स्वस्थ यौनसम्बन्ध प्रभावकारी हुन्छ ।
अध्ययनहरूअनुसार अधिकांश व्यक्ति दाँत माभmदा वा अन्य काम गर्दा त्यसको करिब ५० प्रतिशत समय दिवास्वप्न -डे डि्रमिङ) मा खर्च भइरहेको हुन्छ । यौनसम्पर्क गर्दा मात्र हाम्रो मस्तिष्क यताउता नभडकने हुन्छ । अर्थात, डे डि्रमिङ गरिँदैन । मस्तिष्क बरालिने काममा यौनक्रियाका बेला ३० प्रतिशतसम्म कमी आउँछ ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका म्याथ्यु किलिङ्सवर्थ र उनका सहयोगि डेनियल गिलवर्टले यस विषयमा गरेको अनुसन्धानमा के पाए भने प्रायः व्यक्ति मुड बिग्रेका बेला दिवास्वप्नमा रमाउँछन् । तर हाम्रो मुड ठीक पार्न डे-डि्रमिङ साह्रै थोरै सहयोगी हुन्छ । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका जोनागथम स्मलउडका अनुसार नेगेटिभ मुड र माइन्ड वान्डरिङबीच सम्बन्ध स्थापित गर्नु निकै कठिन हुन्छ । अध्ययनको निष्कर्षअनुसार अवसादबाट बच्न डे-डि्रमिङ गर्नु आवश्यक छैन तर आफूलाई व्यस्त राख्दै ध्यान गर्नाले फाइदा पुग्न सक्छ । दिवास्वप्ना थुप्रै आविस्कारको जननी रहेको तथ्यसमेत छ ।
यौन अपराधमा इन्टरनेट
इन्टरनेटमा सहज उपलब्ध पोर्नोग्राफीले मानिसको चरम कल्पनालाई साधारण मात्र बनाउँदैन, यसले हेर्ने व्यक्तिहरूलाई यौनअपराध गर्न प्रोत्साहनसमेत गर्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार इन्टरनेट पोर्नोग्राफी मानिसको यौन उत्कण्ठालाई बढाउँछ र यसले मानिसलाई हिंस्रक कल्पनाका लागि समेत उक्साउँछ ।
पोर्नोग्राफीले मानिसहरूलाई अझ बढी क्रूर र पथभ्रष्ट व्यवहार गर्न उत्साहित गर्छ । यौनअपराध र पोर्नोग्राफीमा प्रेरणात्मक सम्बन्ध रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । यो अध्ययनमा वोरसेस्टर विश्वविद्यालयका काग्निटिभ साइकलोजीका प्रा. टिम जोन्स र अन्य सहयोगी अनुसन्धानकर्ताबाहेक बि्रटेनका शीर्ष क्रिमिनोलोजिस्ट प्रा. डेभिड बिल्सन पनि सामेल थिए ।
यो अध्ययन प्रतिवेदनमा यौनअपराधमा सामेल रहेका अपराधीसँग गरिएको साक्षात्कारलाई समेत सामेल गरिएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार थुप्रै हिंस्रक यौनअपराध गरेका कारण १४ वर्षको काराबासको सजाय भोगिरहेका एक अपराधीले के बताए भने यौनअपराध र इन्टरनेट पोर्नोग्राफीबीच प्रेरणास्पद सम्बन्ध हुन्छ ।